5.5 HP Johnson 1960 Model CD-17 nguBosse "Bo" Petersson - Stockholm, Sweden | Ukulungiswa Kwezimoto Zesikebhe Sangaphandle
5.5 HP Johnson 1960 Model CD-17 nguBosse "Bo" Petersson - Stockholm, eSweden
Kuthunyelwe ngu- ttravis on Ilanga, 10 / 28 / 2018 - 21: 14
U-Bo ube ngumngane walesi sayithi kusukela kuqale futhi kungukuphefumulela ukuthi ngigcine le sayithi idlula eminyakeni eyedlule ye-13.
Ihanjelwe ku I-Outboard-Boat-Motor-Repair Ikhasi le-Facebook November 1, 2009.
Thenga i-1960 5.5 HP Johnson CD-17 Izingxenye
Ngingathanda ukukunika ukuncoma kwami ​​nokubonga okuningi ngokuhle kakhulu
indawo, kanye nezihloko ze-Tune Up.
Ngiye ngawasebenzisa kakhulu, futhi babehlale bekhona ukuze baxazulule
imibuzo ekulungiseni kokuqala kwangaphandle engikwenzile.
Mech. Ingcweti ngokusebenza, ngasebenza iminyaka engu-38 ngophethiloli wamafutha
imishini (Bosch) eSweden, okungukuthi, ukuthengiswa kwezobuchwepheshe kanye nesicelo segesi
Ukuba kokubili okusebenzayo kanye nemfundiso, kodwa, kuze kube manje, ngisondele kuphela
bekasebenza nge-4-stroke diesel kanye ne-gas engines.
Ukuwa kokugcina salimemezele ukuphuma kwe-4-6 hp ngesikebhe sethu se-14'rowing.
Ukuthola impendulo eyodwa, sithenge i-Johnson Seahorse 5.5hp esiqhingini sethu
Ulwandle lwaseBaltic ngaphandle kwe-Stockholm, eSweden. Injini ingaphenduka, ngakho ngabuza
le ndoda uma igijima. "Yebo, eminyakeni emibili eyedlule", waphendula, ngakho sathenga
I-Johnson encane i-CD17 (1960) enombhalo we-serial B 9716, owawukhona
eyenziwe embonini yaseJohnson eBelgium emakethe yaseYurophu.
I-Tune-Up ibe yinkinga yangempela, ngezinye izikhathi engavamile.
Ekhaya sithole i-80% yamanzi ku-tank, i-cylinder head head cracks "i-mended" nayo
eziningi ze-silicone, izimpawu zokushisa (ukudweba okulahlekile) ngenxa yokunamathela
Thermostat. Ngakho, injini yayisondelene kakhulu ne "ithuna". I-spark plugs,
Kodwa-ke, kwakunokusha futhi ubuso obuhle, ngakho nganquma ukuzama "Isithunywa
Into yokuqala, ikhanda elibheke phansi, lalinamathele kancane
i-aluminium tube, kanye nezinwele eziseduzane-i-water jacket crack yocwecwe yajozwa nge-LocTite "engunaphakade". Ukuqiniswa kweglasi eplastiki egcwele iplastiki
(Plastic Padding) yaqeda ukusebenza.
Ukukhipha ngaphandle, izinsimbi eziyisithupha (eziyishumi) ze-cylinder kanye neyodwa (kweziyisikhombisa)
Ama-Bolts ekuhlukaneni kwenhloko yamandla kanye neyunithi ephansi ephukile. Ngisho
ukubhoqwa ngokucophelela kwalezi zintambo ababengenakwenzeka ukuzigcina phezulu
ikhwalithi. Inkinga ixazululwe ngokugayisa amamitha we-8,5mm, nokuyihlanganisa
ne-thread ye-M10 intambo. Ukunqunywa kwezinduku ezifakiwe ze-M10 ngezintambo ze-¼ "ze-UNC
efakwe, ihlanganiswe ne-LocTite "yokuhlala unomphela."
Zombili izingxube zaziqhekekile, futhi zinezinkambo ezimfushane, ezinqunyelwe ukushisa, i-thermostat enzima,
njengoba kushiwo, kwakunamathele, imfucuza isiphelile. Njengoba izindlu zezindlu zokuthungatha ziningi kakhulu
sigqoke futhi sigwetshiwe, le ndawo yayisetshenziswe kahle, igcwele, futhi iyingxenye yokwakha
nge-glass fiber egcwele iPadding Padding
Okubi nakakhulu, inaliti ephakeme yejubane ephukile kanye nentambo ehambisanayo
isitsha se-float sabhujiswa. Ngenzele inaliti entsha yethusi kulayini lami, futhi a
Ukufaka ithusi kubhodlela le-float.
I-gaskets entsha (ikhanda, i-driveshaft, i-thermostat), i-thermostat, i-impeller,
izikhwama, amaphuzu, i-carburetor kit (ene-plastic float added)
ama-plug wire nama-caps, afakiwe. Ngendlela, ngakhetha ukungenasici
izinsimbi ze-steel for the head cylinder. Ngeke zibhubhe, ngakho kulula
Khipha. Ngithemba, ngeke ngidinga ukukhipha.
Ngasebenzisa i-LocTite / i-Permatex Form-a-Gasket kuzo zonke izintambo nasemanzini
Ngemuva kokusebenza konke lokhu kugijima okubukeka kahle, impela, amaqhinga, kuqala kuqala futhi,
nakuba kungahlosiwe kusukela ekuqaleni, kwakunesineke esisha futhi kubukeka sengathi kwakunjalo
beza ngqo kusuka egumbini lokubonisa. Izindleko eziphelele yi-400 $ nomsebenzi wami siqu, kodwa
injabulo yokwenza lokhu kubuyisele inginike isinxephezelo esigcwele futhi
yena # 28 ubonisa ukuthi i-outboard ibheke ngaphambi komdwebo.
Ukushayela umkhiqizo we-8,5mm, #48, ngaphambi kokucubungula nge-M10 njengoba kubonwe ku- #49. Induku encane ifaka izintambo ezingu-¼ "ze-UNC, ezenziwe ngendwangu, njengoba zibonakala ku # 34.
Inhloko elungisiwe ene-pipe efakwe eduze kwesinye sezinhlamvu zamabhodlela, #42. Imikhakha futhi wakha echwebeni nge "Plastic Padding", #43.
Ukuguqula inaliti ye-H / S kubonakala ku- #45 naku- #47.
Esithombeni #44 inaliti entsha ye-H / S, cishe isikhathi eside, ngaphambi kokwenza ukuhlukaniswa, ukuguqulwa kwe-threaded ne-cone ye-screw yokuvala. Ukubona okufakiwe kwe-threaded threaded esitsheni kungabonakala. I-old coork float yayisimweni esihle kakhulu futhi ekuqaleni yayinezinhlamvu ezintathu ze-shellac.
Njengoba sasebenzisa uphethiloli we-alkylat esikhundleni sokujwayelekile, kwakulungile. Kodwa emva kwenkathi, ngashintsha ukuba ngifake ipulasitiki ye-'94, ngakho-ke singakwazi ukugijima ngephethiloli evamile eshibhile.
Izithombe ezifakiwe zikhombisa uJohnson Seahorse 5.5 hp yami emhlabathini futhi lapho egibele isikebhe sethu sokudoba i-14', thayipha uhlobo "Siljan" olwenziwe i- "JOFA" kusukela ekuqaleni kwe-'70-ies '. Kuthengwe njengengozi engenakusetshenziswa ye-400 $. Njengengozi yokuphelelwa yisikhathi, i- "JOFA" imele "uJohnsons Fabriker" (Izindleko). Kodwa-ke, akuhlangene nhlobo ne-OMC, kodwa mhlawumbe eyaziwa ngokwenza izikhanda ze-ice hockey nezinye izinto zokusebenza zeplastiki nezemidlalo.
Njengoba ungabona ngisebenzisa i-carriage encane yokuthutha ukubhekana nokuphuma. I-Paint cishe inguqobo (i-Audi 90 emhlophe) kusuka kumathini angaphafaza ku-primer ehambelanayo. Umdlalo omnyama esikhwameni se-injini uhluleka ezithombeni zomhlaba kodwa ungeziwe ezithombeni ezilandelayo. Futhi ku-cover ye-injini, ngilahla amafremu ezindala zenjoloba ezungeze ipuleti ebusweni ku-#27.
Ngithola lezi ezintsha zibe zihle kakhulu. Njengamanye, abangane abathile bathi - "... lokhu kwangaphandle kubheka brand entsha" ...!
Indodana yami enkulu uSamuel (8) njengoba kubonwe ku-#78 inomnandi kakhulu okwenza ukuhamba okuncane njengamanje, kanye nomfowabo uFortus (5).
Ngihlezi ebhuloho lethu elingu- #5 ngibheke echwebeni, "Mysingen". I-bay, kunkulu, i-20x45 km, iqala esiqhingini sethu i-Ornö futhi iyingxenye yeBaltic Sea (i-0.7% usawoti). I-Baltic ikhulu kakhulu, i-1300x 400 km. Isiqhingi siseduze nesiqhingi esikhulu kunazo zonke esiqhingini sase-Stockholm, esineziqhingi ezinkulu nezincane ze-25.000!
Ngithumele izithombe eziningi, futhi ungayisebenzisa njengoba uthanda. Kube mnandi kakhulu ukuqala loxhumana naye nawe.
Futhi, ngaphandle kwezihloko zakho nezithombe ezinhle kakhulu angizange ngijabule ngalokhu.
Ngilangazelela ukuzwa kuwe, futhi ngithemba ukuthi uyathanda izithombe ...
Imoto isasebenza kahle iminyaka eminingana ngemuva kweprojekthi.
Buka iVidiyo kaBo nesikebhe sakhe neMoto
Kuthunyelwe ngu- Fischer Ngo-Tue, 04 / 16 / 2019 - 21: 54
Sibuyise iyunithi efanayo lapha eWisconsin USA. Jabulela okuthunyelwe kwakho nezithombe zakho. Siyabonga ngokwabelana.